विज्ञान प्रविधि - नारी
स्मार्टफोन हामी सबैको जीवनको अटुट हिस्सा बनिसकेको छ । बिहान उठेदेखि राति नसुतेसम्म हामी यसमै निर्भर रहन्छौं । चाहे मर्निङ वाक होस् वा अनलाइन पेमेन्ट, सपिङ होस् वा दिक्क लागेका बेला गीत सुन्न होस्, म्यासेन्जर, भाइबर, इमो, इमेल आदि हरेक कुरा चेक गर्न हामी फोनकै सहारा लिन्छौं । सारा संसार स्मार्टफोनलाई नै बनाइरहेको यो अवस्थामा हामी के सोच्दैनौं भने यो सानो उपकरणले हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्तो र कति असर पुर्‍याइरहेको छ ? स्मार्टफोनमा कुनै एउटा म्यासेज आएन भने हामी उदास हुन्छौं, अझ क्षणभरका लागि फोन बिग्रियो भने त हामीलाई संसारै डुबेको महसुस हुन्छ । फोनमा ब्यालेन्स सकियो वा इन्टरनेटको स्पिड सुस्त भयो भने हाम्रो तनाव उत्कर्षमा पुग्न थाल्छ । फेसबुक वा अन्य सोसियल साइटमा आफ्नो स्टेटस अपडेट गर्न सकिएन वा अरूको पढ्न पाइएन भने बेचैनी बढ्दै जान्छ । यसका अतिरिक्त कतिपयमा आफ्नो फोन हराउला कि भन्ने डर हमेसा रहन्छ । फोन एक मिनेटका लागि पनि आफ्नो आँखाबाट टाढा भयो भने तनाव सुरु हुन्छ । फोनका कारण के–कस्ता समस्या निम्तिन्छन् जानी राखौं ।नोमोफोयिबालोवा स्टेट युनिभर्सिटीको एक शोधअनुसार स्मार्टफोनले मानिसमा नोमोफोयिबा नामक नयाँ रोग निम्त्याइरहेको छ । यो रोगका कारण मानिसमा हरेक क्षण मोबाइल हराउँछ कि भन्ने भय रहन्छ । अझ मानिसमा यस्तो बानी हावी हुँदै जान्छ कि उनीहरू ट्वाइलेट जाँदा पनि फोन साथमै बोकिरहन्छन् र दैनिक ३० भन्दा बढी पटक फोन साथमा छ कि छैन भनेर जाँच गरिरहन्छन् । फोन घरमै वा अन्यत्र कतै छुट्यो भने जरुरी कल र म्यासेज छुट्यो होला भन्ने डर हुन्छ जसको असर मानिसको व्यक्तिगत व्यवहार एवं व्यक्तित्वमा समेत पर्दै जान्छ । यस्ता मानिसलाई फोनबिनाको जिन्दगी अधूरो–अपूरो लाग्छ । उपचार के हो ?स्मार्टफोनले जीवनलाई स्मार्ट एवं अपडेटेड बनाउँछ जुन नकार्न नसकिने कुरा हो । यद्यपि अर्को के कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ भने यसले आफ्ना लागि सुविधा उपलब्ध गराउँछ कि यो दिक्दारीको कारण बन्छ ? मोबाइल फोनको यो लतबाट आफूलाई बाहिर निकाल्न आफ्नो जीवनको कुनै ठोस लक्ष्य बनाउनुपर्छ ।आफूलाई मनपर्ने रुचितर्फ ढाल्नुपर्छ । अफिसमा काम गर्दा फोनलाई इयरप्लेन वा साइलेन्स मोडमा राख्न सकिन्छ । यसो गर्दा अनावश्यक म्यासेज र कलबाट मुक्त हुन सकिन्छ । आफ्ना सबै सोसलमिडिया नोटिफिकेसन बन्द गर्ने तथा फोनमा अनावश्यक एप्स नराख्ने ।जसले गर्दा फोनमै निर्भर रहनबाट जोगिन सकिन्छ । भच्र्युअल वल्र्डबाट सम्बन्ध निर्वाह गर्नुको साटो वास्तविक जीवनमा साथीभाइ, इष्टमित्र एवं आफन्तका साथ समय बिताउनुपर्छ । जति सकिन्छ फोनबाट आफूलाई टाढा राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ । अनुशासित रूपमा यो नियम पालन गर्ने हो भने यो लतबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।
नारी संवाददाता , पुस ३, २०७५
नारी संवाददाता , भाद्र १३, २०७४
आर्थिक विकासले तीव्र गति नलिए पनि हाम्रो मुलुकमा पनि एटीएमको प्रयोगद्वारा बैंकिङ कारोवार गर्ने मानिसहरूको संख्या बढ्दै गएको छ र त्यसले दैनिक व्यवहारलाई सहज तुल्याएको छ । यही क्रममा इएमआई (इक्वेटेड मन्थ्ली इन्स्टलमेन्ट) का माध्यमद्वारा किस्ताबन्दीमा कर्जा लिन सकिन्छ ।
नारी संवाददाता , पुस २३, २०७३
च्यालेन्जिङ भूमिका खोज्दै रेसु
अध्ययनमा अब्बल रेसु तामाङमा सानैदेखि केही नयाँ काम गरौं भन्ने सपना थियो । नाचगान तथा अभिनय गरेर घरमा सबैलाई मख्ख पार्ने रेसु डेब्यु चलचित्र द विनरमा आफ्नो वास्तविक जीवनमा जस्तै विशेष भूमिकामा देखा परेकी छिन् ।
नारी संवाददाता , पुस १९, २०७३
नारी संवाददाता , पुस ३, २०७३
सय वर्ष पुरानो पुस्ताको कथा
सय वर्ष पहिलेको पुस्ताको कथा प्रस्तुत गरिएको चलचित्र पुरानो पुस्ता मंसिरको पहिलो हप्ता प्रदर्शनमा आउने भएको छ ।
नारी संवाददाता , मंसिर ८, २०७३
बाहिर निस्कँदा हातमा ट्याबलेट, घरमा भिडियो गेम तथा कार्टुन अहिलेका बालबालिकाहरूको दिनचर्या बनेको छ ।
झरना नहर्की, मंसिर १, २०७३
खर्चालु साथीको पहिचान
फजुल खर्च गर्ने साथीलाई सम्हाल्न निकै कठिन हुन्छ ।
नारी संवाददाता , भाद्र ७, २०७३
हामी थुप्रै प्रकारका खाद्यपदार्थ उपभोग गर्छौं । हामी खानपानप्रति उदासीन पनि रहन सक्दैनौं । त्यसैले खानाप्रति सजग र सचेत हुनु आवश्यक छ । ताजा तथा विषादीरहित खाद्यपदार्थ उपभोग गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।
नारी संवाददाता , श्रावण २९, २०७३
एकैपटक धेरै काम गर्नु खतरनाक
एउटा हातमा फोन, दोस्रोमा बेलन अनि कम्प्युटरमा काम गर्दै मोबाइलमा कसैलाई म्यासेज गर्नु । छोराछोरीलाई पढाउने क्रममा अफिसको प्रेजेन्टेसन तयार गर्नु । यो हो आजका कामकाजी महिलाहरूको कथा ।
नारी संवाददाता , श्रावण २१, २०७३
आपत्कालीन अवस्थाका लागि कोष
कुनै पनि आशंकाबिना कसैको पनि आर्थिक अवस्था बिग्रन सक्छ । व्यवसाय घाटामा जानसक्छ । लगानी गरेको ठाउँमा भनेजति नाफा नहुन सक्छ । त्यसले आफ्नो आर्थिकस्थिति नाजुक बनाउन सक्छ । त्यसैले सदैव वित्तीय योजना बनाएर
नारी संवाददाता , श्रावण १४, २०७३